Hooggantoota ODP yoo dhuguma odeeffannoo kan hin qabaanne bira nuuf gahaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHooggantoota ODP yoo dhuguma odeeffannoo kan hin qabaanne bira nuuf gahaa
«Hooggantoota ODP yoo dhuguma odeeffannoo kan hin qabaanne bira nuuf gahaa
By Keessa Beekaa Oromoo
“Akka dubbiin kun gad fageenyaan qorachuun gara seeraatti commander Tasfaayee Ashinee dhiyeessuun barbaachisaadha. Poolisiin Oromiyaa commander Tasfaayee Ashinee ol guddisuun dhagahe. Hanga Ammaatti bakka inni jiru wallaalee ture. Tasfaayee Ashinee Nafxanyaadha. Garuu innii gosa warra mareenaafi haaruti himata. Abshaalumaan uummata goyyoomsa.
Har’a gosa isaa addaan deemamee haqaa addaan baafachuu ni danda’ama. Yakka suukanneessaa uummata naannoo Amboorraatti dalageera. Namoota naannoo Ambootti ‘Gaallaa Gadaayii” warraa ijaaran keessaa inni isaan tokko. Dhugaa kana adda baafachuu yoo barbaadame yemmuu gabreelii Gudaritti Qeesonni meeshaa waraanaa kuusaa turan Tasfaayee Ashinee angaafa harka keessaa qaba. Gaafa icciitiib bahee meeshaan qabamu dubbi ukkaamsee himanni akka hin banamne godheera.
Dubbii sobaati Oromoota Dhiphootu yada kana uumee jechuun federaalatti bilibilee hunda afaan qabachiise. Manni barumsaa Afaan Oromoofi Afaan Amaaraa Ambootti gafaa addaan qoodamu manni barumsaa liiban Afaan Amaariffaafi kennamuu hin qabu jechuun namoota gurmeessee Taamiraati Laayinee bira deeme isa tokko. Siriinsaa Tasfaayee Ashinee Waraana dargii ture. Yemmuu Wallo keessatti waraanni dargee diigamu Ani Poolissiidh ofiin jedhee gara poolisiitti ce’e. Bara 1984, 85, 86, 87 qorataa poolisii Aanaa Amboo ture. Kallattiin ajajni Tasfaayee Ashinee fudhachaa ture, Haddishii, Sisaayii, fi Tawaldee Bisiraati Maa’ikalawwiirrati.
Ajaja waraann naannoo Amboo achi ture Kiflahaagar nama jedhamu waliin hidhata cimaa qaba ture. Hooggantoonni OPDO gurguiddoon hidhata guddaa Tasfaayee Ashinee waliin qabu. Balaa suukanneessaa naannoo Amboorratti gaggeeffame harka Tasfaayee Ashineen waan raawwataniif tuquu hin barbaadan. Har’as OPDO waanti haaromte jennu kanuma nu agrsiisa. Tasfaayee Ashinee akkaa guutuu Oromiyaatti ol guddisuun, ji’a sadii keessatti gara federaalaatti ol guddisuun OPDOn maal akka barbaaddu hunda keenyaafuu ifa ta’uu qaba. Uummata Oromoorratti ajjeechaa labsuusaaniiti.
Yaadaan armaan gadirratti heeruu hundaa Fannoo diimaa Addunyaafi naannoo Amborraa adda baachuun barbaachisaadha. Ani mataan koo mana hidhaa hoomachoo, beeta mangistii, sanqallee keessaan ture. Dhumarra finfinnee Maa’ikalaawwi Tasfaayee Ashineetu na geessee kenne.
Wareegama Gootota hedduuf Tasfaayee Ashinee angaafa itti gaafatamuu /Ajjeechaa Namoonni inni harka keessaa qabu/keessaa kanan yaadadhu :-
1. Asafaa Damisee Abbaa ijoollee 5 Amboo 04 finfinee qabanii namoota shan waliin Tilahuun G/tsaadiqi, Caalaa Baqqalaa dhalootaan gindibarati finfinnee Waajjira Humna ibsaa Ethiopia hojjachaa kan ture, Tasfaayee ..Waashaa sillaasee nama cittuu, Abarraa….halkan Amboo gara Halaltuutti baasuun 1988 ALH kan ajjeesise
2. Gazzuu Teessisaa 1986 Magaala Ambootti qabanii mikaa’ila Awaarotti halkan baasanii ajjeesan
3. Ajjeechaa du’a Daraaraa Kafaan kallattiin Tasfaayee Ashinee keessaa qaba
4. Ajjeechaa Taaddasaa(Taadhessaa Gudar) …warraa gudar kallattiin Tasfaayee Ashinee keessaa qaba
5. Atoomaa Nagaa Homachotti ji’aa sadii Tasfaayee Ashinee reebuun yemmuu of wallaaluun meexxii karaa qarqaratti fidanii gatan 1987 lubbuun isaa darbe (kana dhugaasaa addaan baafachuuf fannoo diimaa adduunyaa raga isaa fudhatee ture. )
6. Baqqaala Abbabaa Abbaa ijoollee 8 Amboo 03 finfinnee qabuun yemmuu Amboo fidan Tasfaayee Ashinee isiniifan baasaa maallaqa naaf kennaa jedhee maatii rakkisaa kan ture ta’uu. Ammaa har’aatti Baqqaalaa Abbabaa bakki inni jiru hin beekamu.
7. Shambal baqqaalaa Argawuu Dinqaa Amboo 01 bara 1986
8. Shaambal Guutuu Atoomsaa Amboo 01 bara 1986
9. Shambaal Immanaa Birraa …….bara 1985
10. Dhibaalaa Girmaayee Asfaawu Gudar mutulu bara 1986
11. Namootaan hidhaa hoomachotti yemmuun ani jiru Tasfaayee Ashinee reebaa ture Waraaqsaa mucaa geedoo, Girsaa mucaa waddeessaa… warra kaan sadii maqaasaanii hin arganne gara isaan seenan hin beeku.”
Yoo dhuguma seerri jiraate Duguuggii sanyiin himatamee Namichi kun seeratti nuuf haa dhiyaatu.
Uummata Amboo fi Lixa shawa irraa !!»
Via: Girma Gutema